Amin'izao fahavaratra izao izao, inona no ambaran'i Apple momba ny fanoherana ny rano ao amin'ny Apple Watch? | Avy amin'ny mac aho
Amin'izao fahavaratra izao izao, inona no ambaran'i Apple momba ny fanoherana ny rano ao amin'ny Apple Watch?
Mandrosoa, Apple hanadio ny tànany raha manana olana amin'ny Apple Watch ianao ary lena. Toy ny sisa amin'ireo fitaovana ao amin'ny orinasa Cupertino, ny famantaranandron'i Apple dia manana sensor izay mahatsikaritra ny fidiran'ny rano ao amin'ilay fitaovanaRaha mitsambikina ity dia hadinoy ny fanamboarana "maimaim-poana" azo atao na dia eo ambany fiantohana aza ny famataranandro.
Tsy zavatra manokana ho an'i Apple io, ny orinasa rehetra izay manampy fanoherana rano amin'ny fitaovany dia manasa tanana raha sendra misy olana ary misy rano hita ao anatiny. Ka tsy zavatra natokana ho an'i Apple io fa aleo apetrakao ity hifantoka amin'izay tena mahaliana antsika. Afaka mandena ny famantaranandron'i Apple eny amoron-dranomasina, pisinina sns ve isika?
Izaho manokana dia tsy matetika mampiasa Apple Watch rehefa mankany amoron-dranomasina na pisinina aho dia tsy mandro miaraka aminy, na dia marina aza fa manao hetsika ara-batana amin'ny toerana misy anao ianao ary rehefa vita izany dia matetika mamafa ny hatsembohana amin'ny rano. Amin'ity tranga ity dia fantatro fa betsaka ny olona akaiky ahy mampiasa azy io any anaty ranomasina, dobo filomanosana sy ny hafa, tsy misy olana amin'izany ary mbola miasa tsy misy olana izy io.
Afaka milomano na mandro amin'ny Apple Watch ve aho?
Avy amin'i Apple izy ireo dia manana faritra web izay anehoan'izy ireo antsipiriany momba ny fampiasana Apple Watch ao anaty rano. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny Apple Watch Series 1 sy ny maodely Apple Watch (andiany voalohany) izy ireo izay mahatohitra ny rano sy ny famafazana, fa tsy tokony hasioka ao anaty rano izy ireo. Ny ambiny amin'ireo maodely dia efa manana fanoherana lehibe kokoa amin'ny rano ary manomboka amin'ny andiany faha-2 dia nilaza ny orinasa fa azo ampiasaina amin'ny hetsika anaty rano ivelan'ny rano, toy ny filomanosana ao anaty dobo na amin'ny ranomasina. Ireo famantaranandro ireo dia mazava fa tsy natao ho an'ny hetsika toy ny antsitrika na ny rano misy fiantraikany.
Avy amin'i Apple izy ireo dia milaza amintsika fa afaka mandro mangina amin'ireto famantaranandro ireto izahay fa tsy tokony hanome sosokevitra savony, shampoos, éditioners, lotion na ranomanitra, satria mety hisy fiantraikany amin'ny tombo-kase hidraulika sy fonosana akôlika. Rehefa manadio ny Apple Watch dia asaina mampiasa rano mafana sy mafana ianao avy eo maina amin'ny lamba tsy misy laso toy ny microfiber. Tsy ampirisihina koa ianao hampiasa ny famataranandro amin'ny saunas na amin'ny efitrano fievohana.
Ny fanoherana ny rano dia tsy fepetra maharitra ary mety hihena rehefa mandeha ny fotoana. Ny Apple Watch dia tsy azo averina hamerina na hasiana tombo-kase hamerina ny fanoherana ny rano, midika izany fa rehefa nosokafana ny seho dia ho very ny fanoherana ny rano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Amin'izao fahavaratra izao izao, inona no ambaran'i Apple momba ny fanoherana ny rano ao amin'ny Apple Watch?
Ny varotra Macs sy iPads dia mitombo amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity